महिला बाँचिरहेका भारत
छन् समाचार छ । हामी कहिल्यै भएनन् मा रुचि हुन को दैनिक जीवनमा महिला र बालिका मा भारत र त्यसैले एक नयाँ परियोजना । ‘आवाज को आमा भारत’ पठाए तपाईं जीवित कोठा मा को चार असाधारण महिला र छ भन्नुभयो मा छोटो भिडियो बारे आफ्नो परिवार, आफ्नो धर्म र आफ्नो इच्छा र सपना छ । कार्यान्वयन लागि हामी ले यो यात्रा मा एक पेशेवर क्यामेरा महिला ।. हामी पैसा आवश्यक छ गर्न सक्षम हुन परियोजना कार्यान्वयन । त्यसैले, हामी लगनशील भई भेला लागि चन्दा ‘को आवाज आमा भारत’ चलिरहेको छ दुई सप्ताह. बरु को मात्र कुरा, तपाईं मा आउन ‘को…
राजकुमारी अनलाइन डेटिङ मा — एक मुक्त खेल लागि केटी मा अनलाइन डेटिङ
त्यसपछि साइन अप हेर्न आफ्नो मनपर्ने खेल यहाँ छ । तपाईं अझै पनि कुनै खाता छ त्यसपछि साइन अप हेर्न आफ्नो मनपर्ने खेल यहाँ छ । तपाईं अझै पनि कुनै खाता छ रिपोर्टिङ गर्न तपाईं क्रम मा प्रयोग गर्न सक्षम हुन यो सुविधा छ ।
विमोहक सुगंध लागि महिला
यो वेबसाइट कुकीहरू प्रयोग संग पाउडरजस्तो नोट तिनीहरूले तपाईं तर्साउनु ध्यान यो हासिल गर्न, अक्सर, नमूनों को मानिस छ, त्यसैले सजिलो छैन यति बलियो, आकर्षक, शारीरिक आनन्दमा लीन सामाग्री एक हुनुपर्छ छन्. बोतल आकार, खेलाडी पुरुष महिला प्रेम: स्लिम र राम्रो सुगन्ध भरेको छ एक प्राकृतिक ताजगी, द्वारा धेरै महिला टिप्पणीहरू को लेखा र लेखा र, गुलाब र चमेली पत्रदल. टिप: उनको राजकुमार जिम मा, सकिरहेको छैन धेरै अत्तर राम्रो छाला रक्त परिसंचरण छ, अधिक तीव्र गन्ध विकसित — र एक अधिक गर्न एक छिटो बारी-बन्द छ । शारीरिक आनन्दमा लीन र, छनौट गर्नुपर्छ विवाह आफ्नो अत्तर, र अधिक तीव्र…
म छु नै प्रयास संग जर्मन ट्याग फ्री र थियो धेरै जर्मन साइटहरु तर एक साइट जस्तै, उडान उभ, म फेला परेन । के उहाँले प्रयोग ठीक छ । त्यसैले म नरमाइलो लाग्यो छु र म छु यो ल्याप्टप मा. अन्य मानिसहरूलाई थाह, र यति मा फ्री छ । समस्या म केहि छ भनेर कल लागि स्थापना क्यामेरा छ । तर साइटहरु छन् बिना केहि स्थापना गर्न अझै शिविर र च्याट । म उपयोग गर्न सक्छन् यो धेरै मान्छे संग, फ्री मार्फत. त्यसैले हामी नै देख्न मानिसहरूलाई र हामीलाई दुई छ । यदि म रन मा क्यामेरा देखि कार्यक्रम को…
अनलाइन डेटिङ मा भारत — मजा भिडियो, संस्करण, च्याट, स्थिति. अनलाइन डेटिङ
हाम्रो मुक्त अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न भारत मार्फत भिडियो च्यानल मंच मा. तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भारतको मनपर्ने अनलाइन डेटिङ भारत मा-अनुप्रयोग मा अंग्रेजी, हिन्दी, तामिल, तेलुगु, कन्नड, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली. डाउनलोड भारतको मनपर्ने अनलाइन डेटिङ भारत मा अचम्मको भिडियो मदत संग फिल्टर, स्टिकर, प्रभाव मदत गर्न सक्छ, जो तपाईं भिडियो मा ढिलो-मो बनाउन।, समय गल्ती, संग प्राकृतिक प्रकाश, स्टूडियो प्रकाश, आकृति, प्रकाश चरण मोनो-प्रकाश सिर्जना गर्न. सम्पादन भिडियो, फोटो थप्न प्रवृत्ति-स्टीकर को फिल्टर मा भारतको मनपर्ने अनुप्रयोग बनाउन आफ्नो भिडियो मा फोटो को प्रवृत्ति छ । प्रयोग सिद्ध गर्न कसरी सिक्न आफ्नो इच्छा वृद्धि हुनेछ, तुरुन्तै । पछ्याउन छैन…
त्यसैले, त्यो एक धेरै आफ्नै (स्वेच्छाले) लुगा शैली र कसरी थाह सेट गर्न एक उल्लेखनीय दृश्य । शक्ति पनि छ एक ठूलो क्यू मा पानी महिला । के त्यो सुरुवात बनाउँछ, तपाईं तयार हुँदा र, यो आशा को उनको यति । यो कुंभ-रानी हुन जन्म एक, तर महसुस पनि ठूलो कम्पनीहरु छ । व्यवसाय त्यो एक क्यारियर महिला, किनभने तिनीहरूले लोकप्रिय छन्, सामना गर्न नयाँ चुनौतीहरू पूरा र यो अभिलाषी । मा एक साझेदारी, पानी खुला महिला लागि सबै । तपाईं नयाँ कुराहरू प्रयास गर्न ल्याउन गतिशक्ति सम्बन्ध राख्छ र आफ्नो प्रियजनको यसरी आफ्नो औंलाहरूको । साझेदारी सुतेको पतन, र…
तपाईं देख्न, तपाईं अधिक अक्सर लिन, कुराहरू धेरै, तर शुद्ध मित्रता तपाईं को लागि पर्याप्त छैन र राय को सबै भन्दा राम्रो मित्र र आमा साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ प्रयास, त्यसैले, सधैं आफ्नो ब्ययफ्रेंडस छ । छैन भनेर उनको मित्र सल्लाह अन्यथा छ । साथै, यो पुरा छ. दोस्रो फाइदा छ । तपाईं मा अक्सर छन् सभाहरूमा वा दलहरू, ढिलो होस् या पछि आफ्नो साथी, वा आफ्नो बाहिर अपिल छौं कि वास्तवमा सँगै । यो तपाईं सक्षम हुनेछ लाग्छ धेरै अधिक सजग यो अवस्था तपाईं को दुई बीच छ । अन्तमा, यो अत्यधिक सिफारिश छ भने तपाईं उनको उपचार बस रूपमा…
मुक्त अनलाइन डेटिङ साइट मा भारत
टिभी कार्यक्रम, प्रसारण, च्यानल, सेवा प्रेस । गर्न, हामी संग तपाईं प्रदान गर्न हाम्रो युक्रेनी र रूसी अनलाइन डेटिङ एजेन्सी, उपयुक्त हेरविचार संग कला को राज्य संचार, यो वेब साइट द्वारा वित्त पोषित छ विज्ञापन । अनुसार अनलाइन अध्ययन, प्रतिशत इन्टरनेट हेर्नुहोस् प्रयोगकर्ता जर्मनी मा अनलाइन भिडियो स्वागत आधिकारिक अनलाइन दोकान को. तपाईं भ्रमण गर्न सम्पूर्ण साइट उपहार कार्ड बुटीक खोज भुक्तानी तरिका उपहार सेवाहरू अनलाइन अखबार । प्रेम महिला वेबसाइट देश को चयन गर्न, यो एशिया-प्रशान्त क्षेत्र । अष्ट्रेलिया भारत इन्डोनेशिया न्यूजील्याण्ड फिलिपिन्समा सिंगापुर । छुट्टी अनलाइन युरोप सुजुकी निरन्तर सुधार मा काम आफ्नो सेवा. प्रयोग गर्न सक्षम हुन…
के बन्द सुरु रूपमा एक ठूलो प्रेम मा परी कथा समाप्त हुन्छ, दुर्भाग्य, मात्र पनि, अक्सर एक हरर फिल्म । यो पुतलीहरु द्वारा उड, एक मानिस र एक महिला अलग बस्न, कम सेक्स र फसाउन, अचानक होलान्. तर किन हो यति धेरै सम्बन्ध मा एक अलग. र हामी किन थाह, त्यसैले केही जोडे, जसले यो बनाउन चाहनुहुन्छ गर्न, धेरै वर्ष मात्र गर्न प्रत्येक अन्य । यो पुस्ता सम्बन्ध, हामी साँच्चै गर्न असमर्थ छ । हामी जान्न चाहन्थे, र संग बोलेको छ दुःखी विवाहित मानिसहरू । र यो थियो हडताली कसरी अक्सर तिनीहरूले बारम्बार, यी कुराहरू तिनीहरूले नियन्त्रण भन्दा महिला गरेको…
हामी खुसी छन् बारेमा आफ्नो चासो सितारा छ । दुर्भाग्यवश, आफ्नो ब्राउजर को धेरै पुरानो छ, हाम्रो. कृपया प्रयोग एक नयाँ संस्करण को इन्टरनेट एक्सप्लोरर वा वैकल्पिक ब्राउजर यस्तो फायरफक्स वा क्रोम. धेरै धेरै धन्यवाद । द्वारा गरिबी उहाँको वरिपरि थाले, भारतीय दर्जी मदत गर्न अरोडा. अरोडा संग छोराछोरीलाई देखि उहाँले स्थापित ‘घाम परियोजना’, सडक छोराछोरीलाई मा महानगर को दिल्ली सक्षम स्कूल भ्रमण । कोठा मा जो कटर अरोडा स्वागत यसको ग्राहकहरु, छ कुनै. जो कसैलाई आउँछ, यहाँ को हृदय मा महानगर को दिल्ली, लागि उपयुक्त, पर्छ पहिलो, एक धेरै विशाल भोजन कोठा । दिउँसो तपाईँले पहिले जस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ…
को लागि देख एक मायालु मानिस लागि एक सम्बन्ध बजार
आफ्नो पोर्टल लागि उहाँले देख छ उहाँलाई लागि — एक मानिस लागि देख एक मानिस — साथी विज्ञापन एकल डेटिङ देखि हामी प्रयोग मा हाम्रो वेबसाइट कुकीहरू र अन्य प्रविधिहरू दिन तपाईं पूर्ण कार्यक्षमता को हाम्रो प्रस्ताव छ । कुकीहरू लागि अनुमति सामग्री को निजीकरण र सेट गर्न सकिन्छ लागि विज्ञापन लागि वा उद्देश्य विश्लेषण । प्रयोग गर्न जारी गरेर हाम्रो वेबसाइट, तपाईं सहमति गर्न कुकीहरू प्रयोग
युवा-मानिस — अन्य जनावरहरू विज्ञापन मा, जनावर र खेत जनावरहरू बजार वर्गीकृत
बजार र सह कुखुराहरु जा होइन सबै जवाफ दिन मा पीसी, तर गर्न रुचि हरेक अनुरोध छ । यो टिप्न-अप स्थान नजिक बिली बाख्राको भनिन्छ, जो को सुरुदेखि छ जनवरी, जन्म भएको छ । हामी बनाउन चाहन्छौं अब प्रजनन देखि हाम्रो सानो शौक किनभने, हाम्रो सीमा छ पुगेको छ । जनावरहरू संग अमेरिकी सारा वर्ष को लागि बाहिर र छ एक ठूलो स्थिर र गर्न सक्छन् मा खुलेर र बाहिर रूपमा तपाईं यो आवश्यकता छ । तपाईं जीवित मा एक ठूलो वन र को. यहाँ तपाईं देख्न सक्छौं, एक धेरै राम्रो तरिकाले मिश्रण आकर्षित कुखुरा देखि हाम्रो सानो शौक प्रजनन…
डेटिङ साइटहरु मा»सूची को लोकप्रिय मिति-प्रदायक
भन्दा लोकप्रिय डेटिङ साइटहरु मा मा एक सिंहावलोकन छ । एक राम्रो सिंहावलोकन लागि हामी विभाजित हामीलाई सबै परीक्षण प्रदायक अनुसार यसको उन्मुखीकरण, र लक्ष्य समूह मा धेरै विभाग छ । तपाईं वरिपरि हेर्न सूची मा छ । शायद तपाईं को लागि केहि छ । डेटिङ साइटहरु छन् रूपमा बालुवा को समुद्र । को लागि खोज सर्वश्रेष्ठ अनलाइन डेटिङ पोर्टल, सजिलो छैन । यो मा एक्लै मा, डेटिङ बारेमा पोर्टल. वर्णक्रम देखि पर्वतमाला साइटहरु लागि गम्भीर डेटिङ पोर्टल लागि कामुक डेटिङ गर्न विशेष चासो छ, यस्तो डेटिङ साइटहरु लागि एकल आमाबाबुले, किसान, को लागि खोज एक साथी विदेश, आदि. यो…
बालिका प्रेम घोडाहरू, केटाहरू खेल फुटबल, नियम, कम्पनी धारण र, पप सांस्कृतिक चित्रहरु दशकहरूमा लागि, यदि छैन भने पनि शताब्दीयौं लागि, लगातार । फोटोग्राफर विल्मा हुर्रिकानेस एक बच्चा रूपमा को एक थियो»ती घोडा बालिका’, दृष्टिकोण को विषय महिला र घोडाहरू रूपमा एक वयस्क तर स्पष्ट छ । महिला विवाह गर्ने एक घोडा छ आफ्नो पनि अब एक पुस्तक प्रकाशित एक फोटो श्रृंखला को मा प्रकाश शेड जादुई बीच जडान मानिस र घोडा र विभिन्न पक्ष को एक मित्रता पड़ताल, सधैं त्यहाँ छ एक अधिक शक्तिशाली आधारित, गहिरो आदर, प्रत्येक अन्य । हामी वर्षीया, जसको तस्वीर पहिले नै युरोप र एशिया…
परिपक्व महिला र पुरुष भेट्न परिपक्व बैठक
परिपक्व महिला पूरा, परिपक्व छ । अब, निःशुल्क, पुरुष र गृहिणियां गर्न प्राप्त गर्न थाह छ । हजारौं को. आज पनि,***) ( हामी सिफारिस चरण-बुद्धिमानी आपसी विनिमय व्यक्तिगत डाटा जस्तै छ । वा गुगल तपाईं देख्न सक्छन्, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको. नक्कली तस्बिरहरू छन्, त्यसैले गाह्रो छ । पहिलो छनौट व्यक्तिगत बैठक मा एक तटस्थ, सार्वजनिक ठाँउ छ । मा रही छैन, एक विदेशी कार ।. मा परिपक्व पूरा परिपक्व महिला दैनिक डेटिङ. धेरै गृहिणीहरूले लागि देख रहे हो, यो बुद्धिमानी छिटो सेक्स, एक स्थिर साथी वा एक प्रेम को साहसिक । परिपक्वता मदत गर्छ तपाईं खोज संग फ्री. यो एक डेटिङ…
समानता र विकास»विश्व बैंक भन्ने अनुमान पछिल्लो समयमा दुई शताब्दीपछि, हरेक वर्ष केही बालिका मारिए किनभने आफ्नो लिङ्ग छ । को हदसम्म हिंसा विरुद्ध महिला र शिशुलाई देखाउँछ बस कसरी उच्चारण को पूर्वाग्रह महिला विरुद्ध, र किन महिला बस कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यदि भारत मा जान्छ र परिवर्तन हुन्छ । आउँदै सप्ताह मा त्यहाँ हुनेछ धेरै चर्चा बीच भारतको सबैभन्दा पुरुष राजनीतिज्ञ को विषय मा सुरक्षा छ । तर शायद कसैले सोध्न हुनेछ कि एक देश सुरक्षित छ, भने आधा आफ्नो नागरिक बस्न वृद्धि डर, छैन किनभने एक खतरा आतंककारीहरू द्वारा वा शत्रु सैनिकहरू, तर समाज मा जो तिनीहरूले जन्म…
एक राम्रो केटी मलाई मन — भारतीय केटी
एक राम्रो केटी मलाई जस्तै छ एक फ्रान्सेली फिलिम द्वारा ç फिल्म थियो, गोली फ्रान्स को दक्षिण मा निर्देशक ç सुनेर छ मा, मूल को आवाज रूपमा एक पत्रकार छन् । यो फिल्म सेवा थियो:»एक चंचल बाटो, फिलिम सेट को नियम बुर्जुवा नैतिकता, र स्थापित संसार मा जो र आत्म-चासो भरिपूर्ण छ । कि एक फिलिम पड़ताल सम्भाव्यतालाई को कालो हास्य, र आफ्नो शैली मा, र प्रकाश समर्थन-जस्तै तत्व हो ।»इन्टरनेट पोर्टल सिनेमा को समय भन्छन्:»एक चिकनी, काट हास्य, र कहिलेकाहीं मा अभिनय र अन्तर्गत ç आफ्नो शोक, र रूपमा सामान्य मा भीड संग यहाँ एक अशिष्ट महिला व्यक्तित्व, यो…
भारत: राज्यको केटी समय अनलाइन
केटी यो छ को मामला मा, निवासी भारतीय राज्य मा मेघालय छ । किनभने मात्र एक छोरी को जन्म, भन्ने सुनिश्चित कुल अवस्थित जारी गर्न सक्छन्. भने कान्छो छोरी विवाह गर्न छ, ड्र उनको पति घर मा परिवार को छ । छोराछोरीलाई प्राप्त गर्न आफ्नो नाम छ । बीच र फोटो को कुल खर्च को दस महिना मा गाउँमा । आफ्नो मंचन, तस्बिरहरू, यो शो को व्यक्तित्व बालिका र जीवन-विश्व को. यो श्रृंखला मा प्रकाशित पुस्तक राज्य को बालिका । छ ल्याउन व्यवस्थित यति धेरै भरोसा गर्न चित्रण बालिका निर्माण गर्न भनेर प्रभावशाली र धेरै राम्रो तस्वीर, को बातचीत द्वारा…
परिवर्तन भएको छ पछि हामी भनिन्छ, हामी तुरुन्तै याद लेआउट को कथा छ, सामान्य सेटअप संग दुई प्रत्येक अन्य शीर्ष मा सिर्जना सञ्झ्याल र एक विन्डो लागि च्याट मा सही विगत एक कुरा हो । आज, तपाईं देख्न हुनेछ मात्र — ठूलो, तथापि. पाठ बक्स छ: तपाईं त समझ संग मात्र वचन र छवि, म डराउछु. प्रयोग गर्न, तपाईं आवश्यक कुनै दर्ता छ । विपरीत मा यस्तै सेवाहरू, छैन पनि आफ्नो लिङ्ग वा एक निक नाम छ । तपाईं के गर्न सबै छ छ माथि देखाउन र मुस्कान । मात्र एक प्रतीकात्मक अर्थमा: पहिले तपाईं गर्न सक्छन् अपरिचित जडान, अनुहार…
केटी गरेर फोन नम्बर को प्रश्न
म एक केटी चाहनुहुन्छ म सोध्न एक बिट अब यो पासवर्ड आफ्नो फोन नम्बर, किनभने म एकदम जस्तै तिनीहरूलाई के म भन्न गर्नुपर्छ र के म भन्न जब त्यो सोध्छन् किन म चाहनुहुन्छ आफ्नो नम्बर । उनको बताउन चाहनुहुन्छ, वास्तवमा, म तपाईं को लागि भन्न, तपाईं जस्तै:’ किन ।.’.). यदि छैन भने तपाईं के गर्न छ जहाँ तपाईं आवश्यक संख्या, माथि पूरा या त, र तपाईं पाउन सक्छन् कि नम्बर । वा सोध्न आफ्नो मित्र को एक यदि तपाईं छन् वा थाहा पाउन सक्छ । उनको सोध्न भने त्यो साझेदारी गर्न संग तपाईं आफ्नो फोन. त्यसपछि तपाईं को आवश्यकता तपाईं…
केटी प्रश्नहरू कि त्यो एक प्रेमी छ । (प्रेम, मित्रता, महिला)
तपाईं चलान गर्न सक्छन् आफ्नो कुराकानी मा निश्चित दिशा मा जो यो छ भने सामान्यतया भने, तपाईं एक साथी छ । उदाहरणका लागि. वा ल्याउन कुराकानी मा सम्बन्ध, पुरुष, प्रेम, भावनाहरू, आदि. को आधार मा आफ्नो बयान, तपाईं अक्सर सँगै टुक्रा चाहे त्यो प्रेमी वा छैन । निस्सन्देह, तपाईं तिनीहरूलाई सोध्न सक्छौं सीधा, तर म गरेको छु यो वास्तवमा, कहिल्यै किनभने, कार्ड मा हेर्नुहोस् -) वैकल्पिक, तपाईं गर्न सक्छन् रूपमा, अरूलाई यहाँ पहिले नै उल्लेख गरेको छ, आफ्नो मित्र को एक ब्ययफ्रेंडस सोध्न तपाईं वा तपाईंको प्रश्न छ । यो आफ्नो मित्र पत्ता लगाउन भोल्ट गरौं उहाँले एक को आफ्नो…
माथि भारतीय डेटिङ साइटहरु
शीर्ष सेवाहरू अधिकारीहरूले मा यो पत्ता लगाउने छ । हालको स्थिति को भारतीय महासागर छ । एकल हैम्बर्ग मा अनलाइन डेटिङ सुझाव कला मा हैम्बर्ग भारतीय वन्यजन्तु एक अनलाइन पोर्टल. अनलाइन डेटिङ साइटहरु को अधिक पेशेवर. के छन् शीर्ष डेटिङ कुकीहरू प्रयोग. भारत भ्रमण सबै विधि देखि मैगी खाना पकाउने स्टूडियो कि यो संग खाने लागि सबै भन्दा राम्रो मित्र लागि, एक परिवार उत्सव, वा ठूलो बार्बिक्यु पार्टी बगैंचामा डेटिङ वेब स्काउट मेरो. शीर्ष अनियमित अवतार: फ्री मा वर्गीकृत बजार मा नै समय विज्ञापन, छ । सुरु विज्ञापन गर्न र भर्खरै लोकप्रिय मदत सबै भन्दा राम्रो खोज डेटिङ साइटहरु. शीर्ष…
केटी संग भारतीय — भारतीय केटी
केही समयअघि क्रिसमस, शिक्षक एनी प्राप्त देखि एक फोन कल भारत । उनको बुबा, जसले हुन अनुमानित छ मा छुट्टी मा, स्पेन देखि छ एक होटल मा जयपुर छ । छोटो-हात तपाईं पुस्तक एक उडान गर्न भारत र बाटो मा छ । बाटो मा, त्यो बुझ्छ बोर्ड विमान धनी भारतीय अरुण छ । आइपुगेपछि भारत, एनी बाटो मा छ, होटल मा जो उनको बुबा थियो उनको चोरी आफ्नो थैली र तपाईं प्राप्त गर्न थाहा भारतीय. छ, प्रबन्धन गर्ने एनी गरेको सम्पत्ति देखि चोर फिर्ता प्राप्त गर्न र अर्को केही दिन आफ्नो रिक्शा माध्यम जयपुर छ । एक गहिरो बन्धन दुई…
गम्भीर सम्बन्ध विवाहको लागि
आधुनिक संसारमा शाब्दिक संग संचार को अर्थ, जो विकास यति तीव्र गतिमा यो छ कि साधारण मान्छे गर्न सक्छन् कहिलेकाहीं गाह्रो हुन सामना गर्न छ । यो परिचितों को लागि एक गम्भीर सम्बन्ध केही मानिसहरू लागि एक टाढा सपना । धेरै मानिसहरू अर्पण गर्न बढी समय आफ्नो काम र व्यक्तिगत समस्या, र कम र त्यहाँ छन् को एक धेरै एक्लो मान्छे । र यो बस शब्दहरू । पक्कै पनि तपाईं याद छ कि एक राम्रो व्यक्ति धेरै गाह्रो छ आज । पहिले किनभने यो धेरै सजिलो थियो संग, एक सुन्दर केटी. र एक तरिका रूपमा परिचय संग एक रूसी महिला…
भारतीय नाम संग अर्थ र मूल
निम्नलिखित मा, वर्णमाला सूची, तपाईं पाउनुहुनेछ धेरै लोकप्रिय भारतीय केटा नाम र केटी नाम छ । किनभने भारत धार्मिक, ऐतिहासिक र पारिवारिक परम्पराहरूको एक ठूलो भूमिका खेल्न, धेरै नाम मा हिन्दू धर्म छ, तर पनि बौद्ध धर्म, वा गरिएको छ । तर पनि पुरातन भारतीय संस्कृत धेरै नाम छन् । त्यसैले, उदाहरणका लागि, इन्द्र, को नाम को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को एक देवी मा हिन्दू धर्म, जसको नाम आउँछ संस्कृत र»को अर्थ छ वर्षा खस्छ» तपाईं कुनै पनि सुझाव, आलोचना वा अन्य टिप्पणी छ । हामी तत्पर गर्न आफ्नो सन्देश